Ithegi: erik qualman | Martech Zone
Maka: erik qualman
Landela abaPhembeleli abaPhezulu bezeNtlalontle ngo-2014
NgoLwesine, Septemba 4, 2014 NgoLwesine, Septemba 4, 2014 Douglas Karr
UGqr Jim Barry we-Edu-Tainment Ibhlog yokuThengisa uMxholo weNtlalontle ubeke uluhlu lwabaphembeleli abaphezulu kwezonxibelelwano (kunye neyakho ngokwenene kuyo!). Ugqirha olungileyo ubhale iposti enomdla, eneenkcukacha kwii-archetypes ze-4 zala mafuthe, echaza iimpawu kunye neentlobo zempembelelo abanazo kwishishini, kubandakanya: Ootitshala-bonelela ngoncedo kunye nokuqonda abaqeqeshi- bathathe inxaxheba kwaye bancede (uyakufumana Ndilapha!) Abonwabisa - bazibandakanye kwaye
Ukuqengqeleka okungashukumiyo kwesuti
NgoLwesithathu, Matshi 5, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Apha ndihleli kwigumbi lasehotele eMilwaukee, eWisconsin. Iqela lethu libonisa inkampani apha ngomso kwaye ibuyela e-Indianapolis. Ndithenge isuti entsha kolu hambo - ibithengiswa malunga neepesenti ezingama-70 kwaye khange ndikwazi ukuyidlulisa. I-brown brown - iphantse ibe mnyama - kwaye intofontofo. Andikhange ndithenge suti kwiminyaka eliqela ndiye ndaziphatha kuyo yonke